UGalenite wathola igama layo kusukela egameni lesiGreki lasendulo galene - "uhola ore". Umbala wetshe uyinsimbi, ingaba igrey nge-tint bluish, ngezinye izikhathi nge-ruffle enama-mottled. I-Galena ibhekwa njenge-ore ebaluleke kunazo zonke ekufakweni kwesizinda.
Ama-deposit. Esikhathini sangaphambili se-USSR: Skarnovye - Altyn-Topkan, Dalnegorskoe (Primorski Krai), iKurgashinkan (Asia Ephakathi), Kansai. Indawo yokuhlala, i-metasomatic ne-hydrothermal - e-Altai, i-volcanic-sedimentary (Leninogorsk, Zyryanovsk, Belousovsky), eNyakatho Caucasus (Sadonskoye). Ukushisa okuphansi e-carbonate strata - eCentral Kazakhstan naseKaratau (Mirgalimsayskoe, Achisay, iZhayrem). Ama-deposit weqembu le-Nerchinsk (Transbaikalia), i-Gorevskoye (Yenisei Ridge).
Emazweni angaphandle: I-Broken Hill, iSullivan (Canada), iNtaba Isa (Australia), iMacArthur, ePoland, eMexico, eChile, eCzechoslovakia (Kutna Hora), e-Tri State (Oklahoma e-US, Missouri, Kansas) .
Izakhiwo zezokwelapha. Leli tshe alikho izindawo zokuphulukisa ezisobala. Kodwa bakholelwa ukuthi kuthonya umzimba womuntu futhi, njenge-tonic, okwenza ijabule, isebenze, ivuselele. Ukuze kuvikelwe i-melancholia nokucindezeleka, kunconywa ukugqoka amacici nge-galena.
Izakhiwo zemilingo. Le mineral inekhono lokuqinisa amandla komoya wenkosi, ukusiza ukufeza imigomo ebekiwe. Kuzosiza ukubhekana nezinkinga zokuphila eziye zavela, ukubhekana nobunzima ngesithunzi. Kukholelwa ukuthi leli tshe ngeke libekezelele noma yikuphi imikhuba emibi yomnikazi, ngakho uzama ukuyihlambalaza nayo. Ngakho-ke, labo abafuna ukuqeda ukubhema, ukulutha kwamaswidi, ukuphuza ngokweqile, ukuphulukiswa kobuqili, leli gama liyadingeka. Eyaziwayo yizindawo ezinjalo ze-galena njengoba ikhono lokuheha udumo, udumo, impumelelo enkulu, kodwa uzolawula ngokuqinile imicabango yomnikazi ukuze angaguli ngesifo se-stellar.
Kumele uqaphele ukuthi i-galena iyinkimbinkimbi kakhulu, isibonelo, uma umnikazi eqala ukunganaki ukuxhumana naye, uzoqala ukuphatha leli tshe njengomhlobiso olula, khona-ke i-galena izosuka kuyo futhi ngeke isayinake. Ukuze ugweme lokhu, kufanele ucabangisise okungenani kabili ngesonto nge-galena futhi ngengqondo imthumelele inhlonipho yakho. Futhi lokhu kuyokwanela ukuba i-galena ibambe isifiso esincane kakhulu somnikazi futhi ihlanganyele ngokuzithandela ekugcwalisekeni kwayo.
Izinkanyezi zeluleka ukugqoka leli tshe ikakhulukazi iTaurus. Ama-scorpios akufanele agqoke leli tshe, ngoba ukuziqhenya nokuziqhenya kwabo akujabulisi kulo matshe, ngakho-ke ngeke kubasize. Okunye okungahle kugqoke.
Ama-talisman kanye nezifiso. Noma yikuphi ukuhlobisa nge-galena kubhekwa njengengqondo. Indandatho nale mineral izokwenza umuntu aqhubeke ephikelela, enenkani. Ngesikhathi esifanayo, uzomsiza ukuba abe nokuthula futhi abe nengqondo. Ubuhlalu noma isikhathi esivela ku-galena sizosiza umnikazi ukuxazulula kalula futhi kumnandi ngisho nezinkinga ezinzima kakhulu. Futhi uma indlebe ngaleli tshe igqoke ngesikhathi lapho ungabaza amandla akho, khona-ke konke ukungabaza kuzoqedwa futhi umphathi uzokwenza isinqumo esifanele. Ikakhulukazi uGalena uyabathanda abaculi, kodwa kusiza abantu bezisebenzi zomuntu.
Njenge-peach: TOP-5 yingozi kwimikhiqizo yesikhumba
Ukwelashwa kwemithi ye-influenza yama-antiviral
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo ye-quartz
Sibelana ngemfihlakalo indlela yokuheha imali nenhlanhla empilweni yakho
I-Hyacinth - induduzo enempilo ekhaya nasemasimini
Isifiso esiyinhloko ukuveza ikhono langempela!
Ukwelashwa kwe-oksijeni - i-mesotherapy yabesifazane
Isaka elimnandi nama-herbs
Ingxenye 1. Ukuzilibazisa ngesikhathi sokukhulelwa: yini engakwazi futhi engeke ibe khona?
Ukufaneleka kulabo abangaphezu kuka-30
Ingabe kufanele ngithenge ku-intanethi?